Football Khabar » काराबाओ कप : सेमिफाइनलमा को–को भिड्दैछन् ?
काराबाओ कप : सेमिफाइनलमा को–को भिड्दैछन् ?
इंग्लिस नकआउट क्लब फुटबल प्रतियोगिता इएफएल कप (काराबाओ कप) को सेमिफाइनल ड्र भएको छ । गत राति अन्तिम आठमा अन्तिम दुई खेल सकिएपछि सेमिफाइनल पुग्ने ४ टोलीको टुंगो लागेको हो । अन्तिम आठबाट टोटनह्याम, ब्रेन्टफोर्ड, म्यानचेस्टर युनाइटेड र म्यानचेस्टर सिटी सेमिमा पुगेका न् ।
यसपटक फाइनल पुग्न सेमिफाइनलमा म्यानचेस्टर डर्बी भिडन्त हुने भएको छ । ड्र अनुसार सेमिमा म्यानचेस्टर युनाइेडले म्यानचेस्टर सिटी प्रतिस्पर्धी पाएको हो । त्यसैगरी, अर्को सेमिफाइनल खेलमा टोटनह्यामले तल्लो डिभिजनको ब्रेन्टफोर्ड प्रतिस्पर्धी पाएको छ ।
पहिलो सेमिफाइनल – टोटनह्याम भर्सेस ब्रेन्टफोर्ड – जनवरी ६
दोस्रो सेमिफाइनल – म्यान युनाइटेड भर्सेस म्यान सिटी – जनवरी ७
प्रकाशित मिति ९ पुष २०७७, बिहीबार २०:१०